Xukunka ICJ ee Bada: Xirmooyinka shidaalka oo badankood maray dhinaca Soomaaliya! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xukunka ICJ ee Bada: Xirmooyinka shidaalka oo badankood maray dhinaca Soomaaliya!
Xadaynta ay Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ ka samaysay xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya ay inta badan xirmooyinka la tuhunsan yahay in ay ku jiraan shidaalka iyo khayraad kale waxay ku mareen dhinaca Soomaaliya ee xuduudda cusub, sida ay warisay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da.
Khabiirkaasi waxa uu xaqiijiyey in xirmada ay khubarada baddu aamisan yihiin in ay ugu khayaaradka badan tahay ay martay dhinaca Soomaaliya.
Wasiirkii hore ee Batroolka Soomaaliya Cabdirisaaq Maxamed Cumar oo xilligii uu wasiirka ahaa ay Soomaaliya sahaminta shidaalka ka samaysay xeebaha Soomaaliya ayaa sheegay in uu baaritaan gaar ah oo uu sameeyey ku ogaaday in xirmooyinka badankoodu soo mareen dhinaca Soomaaliya.
Xukunka xeerbeegtada hoostagta Jamciyada Qurumaha Ka Dhaxeysa ayaan la socon awood fulineed. Balse, shuruucda caalamka waxay xeerinaysaa in ay lama maarmaan ay tahay in loo hogaan-samo. Xukuumadda Nairobi waxay dhowr jeer dalbatay in kiiska lagu dhameeyo meel ka baxsan maxkamadda, balse waxaa diidey Muqdisho.
Previous articleKalluumaysatada Kenya: Ma jirto wax naga hor istaagi kara inaan ka kalluumaysano biyaha loo xukumay Soomaaliya
Next articleMaxay kawada hadleen Danjiraha Soomaaliya ee Pakistan & Taliyaha Ciidanka Badda?
Booliska Soomaaliya:-Qaraxa waxaa ku dhintay 8 ruux, 17 kalana waa ku dhaawacmeen!